Chii chinonzi hukama hweveruzhinji uye hunosanganisira chii? | ECommerce nhau
Chii chinonzi hukama hweveruzhinji uye hunosanganisira chii?
Encarni Arcoya | 03/09/2021 13:34 | Yakagadziridzwa ku 03/09/2021 13:37 | Marketing
Mukushambadzira kune akawanda marudzi emabasa uye mabasa anofanirwa kuve echokwadi. Chimwe chazvo chingangodaro chakakosha, nekuti ndicho chinobatanidza chiratidzo kana zvigadzirwa zvavanotengesa nevateereri. Mune mamwe mazwi, hukama hwevanhu yekambani yako kune vatengi.
Asi chii chiri kuve Ruzhinji Hukama? Ndeapi mabasa anoitwa? Vanopa mabhenefiti here? Ndedzipi nzira dzavanotevera? Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iri basa, kungave nekuti iwe unoda kuzvipira iwe kwariri kana nekuti ndizvo zviri kushayikwa neCommerce yako, saka tinokupa makiyi ese.
1 Chii chinonzi hukama hwevanhu?
2 Ndeapi mabasa ane
3 Maitiro anoitwa neRuzhinji Hukama
4 Chii iwe chaunofanirwa kudzidza kuti uve Ruzhinji Hukama?
Chii chinonzi hukama hwevanhu?
Kana isu takavakirwa padanho rakapa iyo American Ruzhinji Rwehukama Sangano, tsananguro yeizvi ichave iri:
Strategic kutaurirana maitiro anovaka pamwe anobatsira hukama pakati pemasangano nevateereri vavo.
Mune mamwe mazwi, isu tiri kutaura nezve vanhu vane hunyanzvi hwekuita zvine hungwaru kutaurirana zviito zvinoshanda kubatanidza makambani neruzhinji rwavo, nguva dzose padanho rakanaka, hongu.
Kuti vaite izvi, ivo vanoshandisa izvo zvinonzi makambani ekushambadzira, anogona kuve akasiyana kwazvo uye anosanganisira zvimwe zvidzidzo zvakaita sevanokurudzira, mamwe makambani, masangano, nezvimwe.
Tsanangudzo yakawandisa uye yakajeka yezvingave hukama hweveruzhinji inopihwa na Rex F. Harlow, munyori, mupepeti, mushamarari, uye piyona wehukama neruzhinji:
“Hukama neruzhinji ibasa rehutariri rinobatsira kutanga nekuchengetedza nzira dzekutaurirana, kunzwisisa, kugamuchirwa pamwe nekudyidzana pakati pesangano nevateereri vayo; Inosanganisira manejimendi ezvinetso kana nyaya, zvinobatsira mamaneja kuti vagare vachiziva uye vachinzwisisa kune veruzhinji maonero; inotsanangura uye inosimbisa basa revatariri kushandira zvido zveveruzhinji; inobatsira mamaneja kugara kumberi kweshanduko uye kuvashandisa zvinobudirira, kuvanzwisisa seyambiro system yekufungidzira mafambiro.
Ndeapi mabasa ane
Kana iwe uchida kuve Ruzhinji Rwehukama saka unofanirwa kuziva chii chichava mabasa aunofanira kuita. Kunyanya, isu tiri kutaura nezve:
Ita mishandirapamwe yekutaurirana, pamwe nemazano ekuisa kambani kusangana nevanhu vayo. Izvi zvinoda kuramba zvichiongororwa kuti vaone kana vachiwana bhenefiti inotarisirwa kana kuda kuchinjwa.
Taura nevezvenhau. Iwe unofanirwa kutarisira hofisi yekudhinda sezvo iwe uchive unomiririra mufananidzo wekambani. Naizvozvo, iwe uchafanirwa kugadzirira kuburitswa kwemapepanhau, kuronga misangano, maneja mabvunzurudzo, nezvimwe.
Kutaurirana kwemukati. Kunyanya neavo vanogona kunge vachienderana nebasa rako; semuenzaniso, avo vanoita zvigadzirwa, kana avo vanoita kuiswa mazita kweizvi.
Kunze kwekutaurirana. Kwete nevezvenhau chete, asiwo nevanopesvedzera, vanozivikanwa, mamwe makambani, nezvimwe. nazvo kuita kudyidzana.
Hukama hwehukama. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kuziva nezve matanho emitemo, mitemo uye mimwe mirau inogona kukanganisa kambani yako kana veruzhinji vauri kunanga.
Chiitiko musangano. Nechinangwa chekugadzira mufananidzo wechiratidzo unogona kusimudzira kambani.
Ita tsvakurudzo yemusika. Nekuti zvakafanira kuti nguva dzese iwe uzive mamiriro ekambani mumusika kwainoshanda pamwe nevanokwikwidza uye mhando yemutengi yairi kunanga.
Gadzira zvirimo zvinotakurwa nemisangano yekutaurirana.
Manage dambudziko mamiriro ekuedza kudzikisira mhedzisiro inogadzirwa zvakanyanya sezvinobvira.
Maitiro anoitwa neRuzhinji Hukama
Kushanda muhukama neruzhinji hachisi chinhu chiri nyore, kunyanya sezvo uchifanira kugara uchichinja kuti uchinjane nemashandiro anoita nzanga. Nekudaro, pane akawanda mamodheru ayo anogona kushandiswa sePR nzira. Imwe yenyaya huru, uye iyo inenge inogara ichidzidziswa ndiyo inonzi «IACE modhi» iyo inosanganisira zvikamu zvina zvehukama neruzhinji:
Kuongorora. Iko kudzidza kwemusika, makwikwi uye vangangoita vatengi kunoitwa kuti uwane zano rekuti ungaita sei chikamu chechipiri.
Chiito. Iko kwakateedzana zviito zvekukwanisa kushambadzira kambani uye nekuita mushandirapamwe wehukama neruzhinji unoshanda.
Kutaurirana. Iyo inoshandiswa kuziva kuti mushandirapamwe uchaunzwa sei uye kuti unotarisirwa kuita sei kumimwe mhinduro (kana ichibudirira, kana ichishoropodzwa, kana isingashande ...).
Kuongorora. Kuyera mhedzisiro uye kuziva kana iro basa rehukama neruzhinji rwakashanda kana kwete. Izvi hazvingo kuyerwa chete newebhusaiti nhamba, asiwo kuburikidza nehukama hwehukama, kushambadzira kwepasirese uye kwepamhepo, nezvimwe. Dzimwe nguva haibudirire pawebhu asi inobudirira mumasaiti kana vanhu vanotaura nezvenyaya iyi asi hazviratidzike mukutengesa.
Dzimwe nzira dzehukama neruzhinji dzinogona kuitwa mabatirwo emubatanidzwa, kutaura nyaya ...
Chii iwe chaunofanirwa kudzidza kuti uve Ruzhinji Hukama?
Kana iwe uchifarira basa mune Ruzhinji Rukama, saka iwe unofanirwa kuziva kuti zviripo dzimwe nzira dzinoverengeka dzekupedzisira kuve hunyanzvi Ruzhinji Rukama. Izvi ndeizvi:
Dzidza degree repamusoro reFP. Iyo ndiyo inokupa irwo rudzi rwekudzidziswa uye mune nyaya yemakore maviri unogona kutanga kushanda nedhigirii pasi peruoko rwako iyo inokupa iwe ruzivo rwunodiwa.
Dzidza basa rinokutendera iwe kuve nyanzvi muInstitutional Kutaurirana. Ndiyo yepedyo kune izvo zvinoitwa muRuzhinji Hukama.
Shanda pazviri. Kudzidzira ndiyo imwe nzira iyo ichaita kuti iwe udzidze zvakanyanya kubva pabasa iri. Unogona kuita internship kana kutanga kushanda muParuzhinji Hukama, asi usakanganwa iko kudzidziswa, sezvo kuchizokupa iwe maturusi anodikanwa ekuziva zvekuita nguva dzose.
Kunze kwezvo, iwe unofanirwa vane hunyanzvi hwekutaurirana, kuitira kuti meseji yako igare yakajeka uye inonzwisisika, kuti irege kupa kusanzwisisana. Uye zvakare, iri kuwedzera kukosha kuziva mitauro, kwete chete Chirungu, asi kana imwe chete.
Zvino zvaunoziva Ruzhinji Hukama zvirinani zvirinani, ndizvo izvo izvo bhizinesi rako rinoshaya? Iwe unoda kuzvipira iwe kwazviri here? Tizivise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Chii chinonzi hukama hweveruzhinji uye hunosanganisira chii?